Niampirafy ahy tamin’olon-kafa ny olon-tiako dia nisarahako.
Maniry nify ny zanako, asain’ny rafozam-baviko asiana bokotra atao bracelet ny tanany.
Bokotra sendra hita eny an-dalana ihany, hono, fa tsy hoe bokotra ao an-trano, na vidiana eny amin’ny mpivarotra. Tena mandaitra ve ireny ?
Metymahabevohokaverahatoa ka tsymanaofiraisana ara-nofoamin’nylehilahy fa ianaoihany no manome “plaisir” nytenanao ?
Nyhanyfombatokanamahabevohoka dia nyfisian’nytsirinainalahymifanenaamin’nyatodinain’nyvehivavy. Arakaizany,
Fa maninona ny olona mifankatia rehefa misaraka dia tsy mifampiresaka ?
Tsy ny olona rehetra niaraka taloha, nefa nisaraka, no lasa tsy mifampiresaka. Arakaraky ny safidin’ny tsirairay fotsiny io.
Vehivavy 17 taona aho, niaraka tamin’ny lehilahy 23 taona.
Tena tiako izy ary izaho koa nahatsapa fa tena tia ahy izy. Nisaraka anefa izahay izao ary izaho mbola tia azy.
Misy lehilahy manadala ahy, nefa izy efa miaraka amin’olon-kafa.
Izaho entiny mankany an-tranony, nefa izy tsy mety hisaraka amin’ilay vehivavy anankiray. Inona no ataoko fa izy tena tiako be ?
Mandainga amiko foana ny olon-tiako .
Be dia be mihitsy ny zavatra henoko mahakasika azy, nefa izy tsy mba mitsotra amiko mihitsy fa mamitaka foana. Inona no ataoko ?
Bevohokana lehilahy 23 taona ny zanako vavy 16 taona.
Azoko toriana ve io lehilahy io ? Ilay zanako mantsy tsy mety satria sitrapony ilay izy. Raharaham-pihavanana no tiany atao sady ilay lehilahy koa milaza fa hanampy azy ara-bola sy amin’ny fitaizana ilay zaza. Ampio aho fa vaky ny lohako.
Taty aoriana kely anefa dia nisaraka izy ireo ary niteny tamin’ny namako izy fa mbola tiany aho. Izaho koa moa mbola tia azy rahateo.
Ny mahagaga ahy anefa dia tsy manatona ahy izy miresaka an’izany, fa mijerijery foana fotsiny isaky ny mahita ahy. Inona no tokony ataoko fa mijalay aho, izy koa mampalahelo ahy ?
Raha tena tia anao tokoa izy dia tokony ho sahy hanatona anao indray sy hifanaraka aminao, mba ahafahanareo miverina miaraka. Mety manana ny antony manokana anefa izy matoa tsy manao izany. Raha toa ka heverinao fa antony avy aminao no mahatonga azy tsy sahy manatona anao, satria mety matahotra anao izy sao holavinao, ohatra, dia anjaranao ny manao dingana voalohany. Ataovy tsapany fa tsy manana alahelo aminy ianao ary tsy miady aminy. Tsy anjaranao kosa anefa ny mitory fitiavana aminy voalohany. Na izany aza, diniho tsara aloha raha tena mbola mety marina ny ifamerenanareo indray.
Mbola tena tiako ilay lehilahy niaraka tamiko. Efa niezaka ihany aho ny hanadino azy fa tsy mety e ! Marary ny foko, mbola tena tsy foiko izy. Ahoana no ataoko mba hanadinoako azy ?
Tsy misy olona mahavita manadino raha tsy tena resy lahatra aloha fa mila manadino. Raha mbola misy fanantenana ao aminao fa mbola hifamerina ianareo, raha mbola maniry mafy ny hiaraka aminy foana ianao dia tsy ho vitanao mihitsy izany. Mila mahatsapa mihitsy aloha ny tenanao fa tena ny manadino azy no mety. Aorian’izay, tsy kolokoloina intsony ny fahatsiarovana azy. Aza mipetrapetraka sy mandefa fisainana any aminy. Raha vao mitady ho lasa any ny eritreritrao dia mitadiava zavatra atao : mamaky boky, miaraka amin’ny namana, mijery “film”… Raha mbola misy zavatra ahatsiarovanao azy voatahiry any aminao, na fanomezana, na sary, na laharana finday… dia esory lavitra anao. Mila finiavana ny manadino ary tsy misy fahatsiarovana tsy ho voafafan’ny fotoana, fa io finiavana io no maha-vetivety na maha-ela ny fanadinoana.
Misy lehilahy mpiara-mianatra aminay, mahapotika be ahy mihitsy. Izy tsy fantatro na tia ahy na tsia, fa rehefa resahan’ny olona momba ahy izy dia miondrikondrika, asa na menatra na ahoana. Ahoana no ataoko fa tena mahafinaritra ahy izy ?
Mety ho tia anao izy ka tsy tiany ho fantatr’ilay olona miresaka aminy ny fihetseham-pony. Mety mieriteritra izy dia izay miondrika izay no fomba fanaony mahazatra azy rehefa mandefa fisainana... Vinavina daholo anefa izany rehetra izany fa tsy misy mahalala izay tena any anatiny any, raha tsy miresaka aminy mihitsy ianao. Tsy voatery hitory fitiavana aminy avy hatrany akory ianao, fa miezaka manakaiky azy sy manao namany fotsiny. Rehefa mifandray tsara ianareo dia mety hivoatra ihany ny fihetseham-po.